Wararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Ozil, Messi, Sarmiento, Lingard, Sidibe, Romero, Sabitzer, Van de Beek
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Ozil, Messi, Sarmiento, Lingard, Sidibe, Romero, Sabitzer, Van de Beek
January 8, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Tababaraha Fenerbahce Erol Bulut ayaa sheegay in xaalada ku aadan saxiixa ay kooxda kula soo wareegi karto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Jarmalka Mesut Ozil oo 32 jir ah ay cadahay “maalmaha soo socda”. (Mirror)
Lionel Messi, oo 33 jir ah, ayaa u sheegay Neymar inuu qorsheynayo inuu ka tago Barcelona xagaaga oo uu ku biiro Paris St-Germain , iyadoo weeraryahanka reer Argentina uu sidoo kale bartilmaameed u yahay Manchester City . (dailystar)
Manchester City ayaa ku dhow saxiixa ‘ Messiga yar ‘ Dario Sarmiento. 17 jirkaan garabka ka ciyaara ee reer Argentine ayaa haatan u ciyaara kooxda Primera Division ee Estudiantes. (Talksport)
Tababare Steve Bruce ayaa si aad ah u doonaya Newcastle inay la soo wareegto seddex ciyaaryahan oo Ingariis ah oo ka tirsan Manchester United amaah bishaan, waxaana uu si dheer ula hadlay kooxdiisii ​​hore daafaca bidix Brandon Williams, 20, daafaca Phil Jones, 28, iyo khadka dhexe Jesse Lingard, 28 . (90min)
Tottenham ayaa ku jirta boos adag oo ay kula soo wareegeyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee RB Leipzig Marcel Sabitzer, 26, laakiin uma badna inay dhacdo bishaan. (Express)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Holland Donny van de Beek ayaa garaacaya albaabka tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, sida laga soo xigtay weeraryahankii hore ee kooxda Dimitar Berbatov. 23 jirkaan ayaa ku soo bilowday kaliya labo kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, isagoo saxiixay £ 35m bishii September. (theSun)
Goolhayaha reer Argentina ee reer Argentina Sergio Romero, oo 33 jir ah, ayaa la filayaa inuu ku soo laabto kooxda isbuuca soo socda iyadoo wadahadalada mustaqbalkiisa ay sii socdaan. (Sky Sports)
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa ugu deeqay qolalka hoteellada ee Stamford Bridge shaqaalaha NHS markale. (indepedent)
Juventus ayaa dharbaaxo kala kulantay raadinta weeraryahan cusub iyadoo ciyaaryahanka Sampdoria Fabio Quagliarella oo 37 jir ah uu meesha ka saaray inuu ku laabanayo kooxdiisii ​​hore. (MailOnline)